TOEKARENA : Hampiana hiditra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa malagasy
Iaraha-mahalala fa mbola tena taraiky i Madagasikara eo amin’ny fandrosoana ara-toekarena raha mitaha amin’ireo firenen-kafa, raha tsy hilaza afa-tsy ny firenena afrikanina fotsiny ihany aza. 7 mars 2018
Antony maro no mahatonga izany, saingy olana eo amin’ny lafiny fitantanana matetika no fototra. Madagasikara mantsy efa fantatra an-taonany maro fa manana ireo singa rehetra tokony hampandroso ny sehatry ny toekarena saingy tsy voatantana sy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy izany. Ankoatra izay ihany koa, isany mbola lesoka tsy isian’ny fandrosoana eo amin’ny tontolon’ny toekarena malagasy ny tsy fitovian-danja eo amin’ny entana haondrana sy ny entana hafarana.
Hatreto tokoa mantsy dia fantatra fa mbola maro kokoa ny entana miditra avy any ivelany. Mana-porofo izany ny eo amin’ny sehatry ny fitaterana. Araka ny tarehimarika azo izao dia efa mahatratra hatrany amin’ny 580 tapitrisa dolara ny vola mivoaka amin’ny fampidirana entana ataon’i Madagasikara, raha tsy misy afa-tsy 250 tapitrisa dolara kosa ny vola miditra. Isany vahaolana hita àry ankehitriny ny fanampiana ireo orinasa malagasy hisehatra eo amin’ny fampandrosoana ny toekarena. Tafiditra ao anatin’izany sehatra mila hampiana tosika izany ny fizahantany, ny varotra, ny fitaterana, ny fikirakirana ara-bola, ny angovo. Tohanana araka izany ireo orinasa malagasy ireo mba hisy fifandraisana sy ny fifaneraserana amin’ny tsena iraisam-pirenena toy ny Comesa.
Izany indrindra no antony nanatanterahana indray ny atrikasa andiany faharoa an’ny “Commerce et des services” ho an’ny mpisehatra rehetra eo amin’ny tontolon’ny toekarena. Atrikasa izay novatsian’ny Vondrona eropeana vola. Ny fifanakalozana ara-barotra, izay no tokony hatao vaindohan-draharaha, raha ny nambaran’ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny ministeran’ny varotra sy ny fanjifana. Ity farany izay nanamafy fa tsy afaka ny handeha irery ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra fa tsy maintsy mifandray amina lafin-javatra maro. Araka ny fantatra dia hoentina eo anivon’ny governemanta ny fehin-kevitra notapahin’ireo nandray anjara tamin’izany atrikasa izany. Nandritra ny roa andro no nanatanterahana ny atrikasa.